Khilaaf hor leh oo ka dhex-qaraxay wasiirka Warfaafinta iyo Maareeyahay Tv-ga Qaranka. - Haldoornews
Khilaaf hor leh oo ka dhex-qaraxay wasiirka Warfaafinta iyo Maareeyahay Tv-ga Qaranka.
Hargeysa(Haldoornews)-khilaaf in muddo ah-ba huur-sanaa oo salka ku hayaa dana dhaqaale ayaa mar kale, ka dhex qarxay wasiirka wasaaradda warfaafinta s/land Cabdilahi Maxamed Daahir Cukuse iyo maareeyahya Tv-ga Qaranka Md Cabdi cali Mahdi, kuwaas oo isku maan-dhaafsan sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha Tv-ga qaranka iyo Madax-banaanidiisa. Waxana warar si weyn ugu dhuun-daloola sheegayaan in Wasiirka iyo Maareeyuhu si qaawan ugu wada-hadleen barxadda hore ee wasaaradda warfaafinta dhex-deeda, iskuna khilaafeen sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha Telefishanka Qaranka oo Maareeyuhu ku dooday inuu u Madax-banaan yahay Hawlaha Tv-ga halka wasiiruna sheegay inuu Booynti Booynti ula xisaabtami doona hawl kasta oo uu qabto Maareeyaha iyo Madax ka hooseysaa ee Tv-ga Qaranka .
“Wasiirka Cukuse oo ka soo laabtay safar uu raacay Madaxweynaha somaliland goboladda bari ayaa maalintii shalayba wasaaradda la soo galay Farriid-nimo xad dhaaf ah. Taas oo markii uu indhaha saaray Maareeyaha Tv-ga Qaranka ku bilaabay adeer waxba ka khaldan Kharashka Tv-ga ee Xisaab xidhadiina isoo gudbiyaa xayeysiis iyo warar wax kasta waa la idinka rabbaa” sidaasi waxa shabakada warar ee xogreebnews.com uu sheegay Goob jooge ku sugnaa markii weedha kululi dhex mareen wasiirka iyo Maareeyahaya Tv-ga dawladda.
Waxa kale, oo goob-jooguhu noo sheegay inuu dalabka wasiirka ka dareen celiyey Maareeyahay Tv-ga Qaranka Md Cabdi cali Mahdi, kaas oo wasiirka ka dalbaday inuu is dejijo oo ay xafiiska isla galaan waxa aan suuro gelin hadalkii Maareeyaha oo waxa aan weedhihii kulala joojin wasiirka oo doonaayey inuu kaxaysto Baabuurkiisa kana baxo wasaaradda, waxana uu mar kale uu yidhii sarkaalkan oo ka cudur daartay in magaciisa la baahiyo sababo amaan awgood” wasiir horta inaa keen xafiiskaga aynu ku wada-hadalnee” intaa markii uu yidhii Maareyuhuu waxa jawaabo guracani ka soo baxday Wasiirka oo aad moodo inuu qaadireysan yahay “adeer xafiis lahayne aanu xisaab kugu nimaad-no”.
Markii intaa la is weydaarsaday waxa meesha soo gaadhay wasiirku xigeenka wasaaradda oo Wasiirka uu sheegtay inuu waqti kale ka dhigto arrimahan oo ay wax isla eegaa. Si kastaba ha ahaatee waxa aan beryahan dhegaha dadweynaha ku badneyn khilaaf muddo ay iska ilaalinayeey masuuliyiinta wasaaradaasi tan iyo markii la bedelay Maareyihii hore, waxana uu wasiir Cukuse muddo iska ilaalinaayey in la maqlo isku dhac balse soomaalidu waxa ay ku maah-maahdaa Bahal caydhin ma daayo Nina caadadiisa ma baajo waxa cadaan ah inuu wasiirku yahay fimada meesha fadhida.
Waxana indha lagu hayaa halka uu saldhigii doono khilaafkani, iyadoo ay jiraan koox ka mid ah shaqaale weynaha wasaaradda oo wasiirku shaqadii ka joojiyey kana Goosta Mushaharadii iyo Lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray.
Afhayeen Dhuxul oo Dhabarka la soo Taabtay, Hadalkii ugu Liitay oo Been ahina ka soo Yeedhay Xili uu wasirka Arimaha Dibadu sheegay in ay Hay’ado Baxeen….Daawo Dhuxul
Bahda Haldoornews oo Hambalyo Meher Wacan udiraya Cabdirahman Cismaan Isbatoore iyo Hibo Maxamed Cali oo meherkoodu ka dhacay Hotel Maansoor Hargeisa.